Ny fandaharana EduMonday dia manomboka amin'ny IMEX any Frankfurt
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Ny fandaharana EduMonday dia manomboka amin'ny IMEX any Frankfurt
Lova, fahasamihafana ary fanavaozana - lohahevitra mafana manerantany izay miverimberina manerana ny fivoriana sy ny sehatry ny hetsika. Ireo olana ireo dia mitarika ny fandaharam-potoana amin'ny EduMonday lohahevitra be indrindra ao amin'ny IMEX any Frankfurt amin'ity taona ity.
Ny fandaharam-pianarana fanabeazana mivelatra dia mamorona ny hazondamosin'i EduMonday, andro iray feno fanabeazana maimaimpoana natao ny andro talohan'ny IMEX tany Frankfurt, ny Alatsinainy 14 Mey.
EduMonday, izay nanomboka tamim-pahombiazana tamin'ny taon-dasa, dia maimaimpoana ho an'izay rehetra manatrika ny IMEX any Frankfurt ary manolotra fandaharam-pianarana feno amin'ny teny anglisy sy alemà. Ny fotoam-pivoriana dia manome fahitana momba ny famolavolana hetsika, ny fironana amin'ny ho avy ary ny herin'ny fiaraha-miasa - lohahevitra maro isan-karazany ahafahan'ny mpanatrika mampanjifa ny fanabeazana mifanaraka amin'ny filàn'izy ireo amin'ny fampandrosoana ilaina.
Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX, dia nanazava hoe: "Fantatray ny valin-tenin'ny mpanatrika fa tena ilaina tokoa ny fahafaha-manavaka ny indostria sy ny aingam-panahy. Izany no antony hamerenantsika endrika ny programa EduMonday isan-taona hahazoana antoka fa mijanona ho faratampony sy ankehitriny izy io - ireo matihanina amin'ny sehatra samihafa sy ny ambaratonga samihafa dia hahita ny fanabeazana ara-potoana sy matanjaka ary mifandraika amin'izy ireo. Nahazo mpandahateny mahatalanjona sasany avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena lehibe izahay - ireo izay mamaritra ny fomba fanaovantsika orinasa rehetra. ”
Ireo mpanatrika avy amin'ny sehatra sy ambaratonga rehetra dia afaka mijery lohahevitra sy fironana izay tena mifandraika amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny hetsika manokana atokana ao anatin'ny EduMonday natokana manokana ho an'ny sehatra maro ao amin'ny indostria. Ny matihanina amin'ny fikambanana manerana izao tontolo izao dia asaina hanatrika ny Andron'ny Fikambanana sy ny Hariva, hizara fanao sy tambajotra tsara indrindra. Eo ihany koa ny fanabeazana sy ny tambajotra ho an'ny mpitantana orinasa ao amin'ny Exclusively Corporate.
Ireo manam-pahaizana avy amin'ireo fikambanana mavitrika toa an'i Facebook, LinkedIn ary EY dia hizara fironana sy fomba manakorontana mandritra ny Exclusively Corporate, miaraka amin'ny fifantohana mafy amin'ny fanavaozana sy ny firosoana. Ny maha-zava-dehibe ny fitarihana mahery vaika sy ny famoronana lova matihanina dia hojeren'ny manam-pahaizana avy amin'ny Estée Lauder sy MAC Cosmetics, manohana ny Legacy Talking Point an'ny IMEX amin'ity taona ity.
Ho valin'ny fiovan'ny toe-tsaina sy ny fanentanana manerantany dia hatao mandritra ny EduMonday ny kaonferansa voalohany amin'ny She Means Business, nankalazana ny andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny tetikady fihaonana sy ny hetsika - na vavy na lahy - dia asaina hizara fahaizana sy hianatra avy amin'ireo mpikabary sy mpanentana manentana amin'ny hetsika antsasaky ny andro, noforonina niaraka tamin'ny tagungswirtchaft sy tohanan'ny H-Hotels Group.
Manentana ireo manam-pahaizana momba ny asa aman-draharaha sy akademika avy any ivelan'ny indostrian'ny fivoriana dia hanome fomba fijery vaovao ary hizara hevitra ao amin'ny PCMA Business School, programa fampandrosoana matihanina kalitao MBA.
Ny programa ankapobeny momba ny fanabeazana ankapobeny dia misy ireo fivoriana mifantoka amin'ny fampirantiana miresaka ny fahaiza-manao amin'ny varotra, ny paikady ho an'ny fanarahan-dia ary ny teknika fivarotana ho any. Masterclass an-tanana amin'ny famolavolana fifandraisana dia ahafahan'ny mpandrafitra miaina endrika sy fomba vaovao hisarihana ireo mpandray anjara. IMEX koa dia manome maimaimpoana ny Program Design Certificate momba ny hetsika - fampidirana tontolo andro ny Model Canvas Model, maodely fitantanana hetsika stratejika ho an'ny hetsiky ny mpanjifa.
Ao anelanelan'ny fotoam-pianarana, ny mpanatrika dia afaka mandany fotoana handevonana ny fianarany ao amin'ny faritra fotsy, hampiasaina indray ao amin'ny Be Well Lounge ary hahatratra ireo mpiara-miasa aminy rehefa mankafy mozika mivantana. EduMonday dia voahodidin'ny ora mahafinaritra ao amin'ny Adina Hotel mpifanila vodirindrina aminy, mankalaza ny fanombohan'ny IMEX any Frankfurt.
EduMonday dia atao amin'ny Alatsinainy 14 Mey, ny andro mialoha ny IMEX any Frankfurt, 15 - 17 Mey.
eTN dia mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery IMEX.